Tsara jerena ny maha olona | NewsMada
Par Taratra sur 14/09/2020
Aorian’ny orana ny fiakaran’ny rano? Hatramin’ny fivangongoan’ny antsangana entin-driaka, ny mety ho faharavan-javatra… Tsy mifankaiza amin’izany izao fialana miandalana amin’ny fihibohana noho ny fahamehana ara-pahasalamana iadiana amin’ny fihanaky ny valanaretina Covid-19 izao?
Hatramin’izao, misy hatrany, ohatra, ny mampiaka-peo eny ifotony fa tsy mba nahazo anjara fanampiana; eny, na anisan’izay niaritra sy naharitra tamin’ny fihibohana aza. Mbola misy ihany ny velon-taraina sy manome tsiny ny amin’ny fizarana izany: tsy mandeha araka ny tokony ho izy?
Miara-dalana amin’izay ny fahaverezana asa, ny faharavan’ny fananana namidy noho ny tsy fisiana, ny fialana amin’ny fonenana tsy fidiny fa tsy nahaloa hofan-trano… Fahavoazana ifotony navelan’ny ady avokoa izany. Hanao ahoana ny hoavy? Mafimafy sy sarotsarotra no ho ny teo aloha.
Misy ny karazana fanararaotana etsy sy eroa. Tratran’ny tsy fidiny ny maro ka tsy afa-manoatra sy tsy afa-manohitra? Karama mora, ohatra, fividianana entana mora, fandroahana mpiasa tsy amin’ny antony… Nefa misy koa ny mampiakatra vidin’entana, ny midongy tsy mandoa hofan-trano…
Manginy fotsiny amin’izany ny karazana fisolokiana, fisandohana, fanendahana, fitantarana fahasahiranana ahazoana mangataka… Zava-tsy inona akory, mety hikasihan-tanana na hanalana aina olona. Tsy inona fa noho ny fitadiavana hoe sarotra sy mafy avokoa… Tsy misy tsy sahirana amin’izao?
Mila mitandrina ny tena fa miakatra ny rano, miangona ny fako aman’antsanga. Mafy sy lalina ary ela loatra ny ady? Navesa-danja ho azy ny fahavoazana. Tsy nisy lafitsarany izay nentin’ny ady? Fandresena ny valanaretina, fitandremam-pahasalamana ho fomba fiaina, fahaizana mifampitsinjo…
Mety ho mafy sy sarotsarotra ny hanarina izany rehetra izany amin’izao? Eo ny fomba fisaina, ny fomba fiaina, ny fomba fiasa… Ny maha olona ny an’ny sasany no tratran’ny karazana tsimokaretina amin’ny fanaovan-dratsy noho ny fihibohana? Na mila jerena ny maha olona, ankoatra ny sosialy.